Kukhalwe ngokungahlinzekwa ngezidingo zomphakathi | News24
Kukhalwe ngokungahlinzekwa ngezidingo zomphakathi
AMALUNGU esiShayamthetho saKwaZulu-Natal abenomhlangano nomphakathi waseMgungundlovu kanye namalungu amakomidi wamawadi angaphansi kukamasipala waseMsunduzi ngoLwesine oledlule mhlaziyi 5 ku-Okthoba ehholo laseMgungundlovu.
Inhloso yalomhlangano bekungukunikeza umphakathi waseMgungundlovu ithuba lokwethula izikhalo zabo mayelane nokulethwa kwezidingo emphakathini nokucaciseleka ngezi zathu zokubambezeleka kwalokhu kumanye kwamawadi aseMsunduzi.
Ilungu lomphakathi wakwaWadi 13, uSbonelo Thahla uthe umphakathi wakulendawo udinga ukuchazelwa ngokuthi ipayipi lokuthutha indle lizofakwa nini njengoba izindlu zangasese zakulendawo zingenalo ipayipi elidonsa indle kanti eminye imizi isebenzisa imigodi okuyinto eyehlisa isithunzi sabantu.
Elinye ilungu lakwaWadi 13, uLungile Mkhize uthe lewadi inkulu okwenza ukuthi sibekhona isidingo sokuthi yakhelwe umtholampilo, inkundla yezemidlalo kanye nohholo lomphakathi.
“Njalo umakunemihlangano yomphakathi siphoqeleka ukuthi siqashe itende ngoba ihholo asinalo ewadini,” kusho uMkhize.
UThokozani Hlabisa, naye ongumhlali wakwaWadi 13, uthe kwezinye izindawo ezingaphansi kwalewadi kudingeka izindlela zokuhamba ngezinyawo eziseduze nomgwaqo ukuze izingane zesikole zizovikeleka ekushayisweni izimoto ngenkathi ziya esikoleni.
Esinye isikhalo esiphakanyiswe yilungu lalomphakathi waseWadi 13 endaweni yase-France, uBongani Majola, besimayelana nezinga eliphezulu lokusetshenziswa kwezidakamizwa kanye nobugebengu kulendawo.
Uthe ukungabi khona kwezibani zomgwaqo kuWadi 13 eFrance kunomthelela ekunyukeni kwezinga lobugebengu kulendawo.
Isikhalo ngobugebunge siphinde saphakanyiswa nguMlondi Vilakazi ohlala kuWadi 35 othe ukugqekezwa kwezindlu kulendawo kwenyuke kakhulu.
Uqhube ngokukhalaza ngamaphoyisa aseMountain Rise abhekelele lendawo wathi awawuwenzi ngokufanelekile umsebenzi wawo kanti nesiteshi samaphoyisa esikhona kulendawo sibuye sivalwe ngenxa yokungabibikho kwephoyisa elisebenzela khona.
Omunye umphakathi onesikhalo ngamaphoyisa owakwaWadi 14. Lokhu kuvele ngesakhamuzi sakulewadi, uMusa Zuma othe umphakathi wakulendawo uphoqeleka ukuthi ukhiphe imali eningi uma udinga ukuya esiteshini samaphoyisa asePlessislaer.
Umbono kaZuma ngalokhu uthe mhlasimbe uma kungafakwa isiteshi samaphoyisa esingumahamba nendlwane kungasiza ekutheni kwehle izinga lobugebengu kulendawo.
Ezinye zezikhalo ezibekwe amalungu omphakathi kulomhlangano bezimayelana nokwakhiwa kwemigwaqo nezindlu zomxhaso kahulumeni kanye nokudliwa ngokungemthetho komhlaba ngamanye amalungu omphakathi kanye nokutholakala komhlaba okungakhiwa kuwona izindlu zomxhaso.
Amanye amalungu omphakathi akhale ngokungabi nawo ugesi namanzi ezindaweni abahlala kuzona.
Usotswebhu uMnu. Truman Magubane uthe zonke izikhalo ezibekwe ngumphakathi zizodluliselwa kwiminyango efanelekile kanti izimpendulo zizokwethulwa mhlaziyi 3 nango 4 ku-Novemba esiShayamthetho.